हरिप्रसाद अर्याल ‘सन्देश’
पछिल्ला दिनमा पार्टी विवादको निकासका लागि प्रचण्डले अगाडि सारेका एजेण्डामा उनी निकटकै नेताहरु खुलेर विरोधमा देखिएका छन् । निकट मानिने कतिपय नेताहरुले नै उनको भूमिका ‘नाजायज’ हुन थालेको समेत टिप्पणी गरेका छन् । पार्टी विवादकै बीच डाकिने भेला र बैठकहरुमा नै उनी निकटका प्रभावशाली नेताहरुको उपस्थिति देखिँदैन् ।
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पार्टीभित्र बहुमत पक्षको नेतृत्व गर्दछन् । पार्टीभित्र बलियो मानिने माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल लामो समयदेखि नै उनको नजिक देखिएका छन् । तर, पछिल्लो खिचातानीका बीच भने उनी आफ्नै समुहबाट टाढिदैं गएका छन् ।
पछिल्ला दिनमा पार्टी विवादको निकासका लागि प्रचण्डले अगाडि सारेका एजेण्डामा उनी निकटकै नेताहरु खुलेर विरोधमा देखिएका छन् । कतिपय निकट मानिने नेताहरुले नै प्रचण्डको भूमिका ‘नाजायज’ हुन थालेको समेत टिप्पणी गरेका छन् । पार्टी विवादकै बीच प्रचण्डबाट डाकिने भेला र बैठकहरुमा नै उनी निकटका प्रभावशाली नेताहरुको उपस्थिति देखिँदैन् ।
माधव नेपाल र झलनाथको साथ
पार्टी एकतादेखि नै नेकपाभित्र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालले प्रचण्डलाई साथ दिँदै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निरन्तर पेलानमा परेका उनीहरुले पार्टी एकतासँगै प्रचण्डलाई साथ दिएका हुन् । पछिल्ला विवादमा पनि उनीहरु खुलेरै ओलीको विरुद्वमा छन् ।
पछिल्ला अधिकांश गुटगत भेलामा पनि उनीहरु प्रचण्डको साथमा देखिन्छन् । गत असार १० देखि जारी स्थायी समिति बैठकमा पनि उनीहरुको एजेण्डा करिब संयुक्त नै छ । पार्टी विवादकै बीच गत असार १७ मा भएको झम्सीखेल भेलामा पनि प्रचण्ड, खनाल र नेपाल समुहले ओलीलाई दुवै पदबाट राजीनामा गराउने संयुक्त निर्णय गरेका थिए । ओलीलाई राजीनामा गराउने संयुक्त निर्णयमा पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि साथ दिएका थिए ।
पार्टी विवादकै बीच गत असार १७ मा भएको झम्सीखेल भेलामा पनि प्रचण्ड, खनाल र नेपाल समुहले ओलीलाई दुवै पदबाट राजीनामा गराउने संयुक्त निर्णय गरेका थिए । ओलीलाई राजीनामा गराउने संयुक्त निर्णयमा पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पनि साथ दिएका थिए ।
स्थायी समिति बैठक स्थगित भईरहँदा पटक–पटक भएका गुटगत भेलामा पनि खनाल र नेपाल समुह ओली विरुद्व खुलेरै देखिएका छन् । गत असार २१ मा भएको नेपाल पक्षीय नेताहरुको भेलाले पनि प्रचण्डलाई साथ दिने निर्णय गरेको थियो ।
त्यससँगै भएका श्रृखंलाबद्ध भेला तथा छलफलमा पनि नेपाल र खनाल समुह प्रचण्डको साथमा देखिन्छन् । गत मंगलबारको स्थायी समिति बैठकमा पनि उनीहरुले प्रचण्डलाई साथ दिएका थिए । ओलीको एकल निर्णयमा स्थगित बैठकमा पनि प्रचण्डलाई अगाडि बढ्न उनीहरुको सहयोग थियो । प्रचण्ड समुहकै केही सदस्यहरुको उपस्थिति नभएको बैठकमा खनाल र नेपाल समुहका अधिकांश स्थायी समिति सदस्य उपस्थित थिए ।
तर, सबैभन्दा नजिक ठानिएका नै टाढिए
तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकता हुँदै गर्दा नेता जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले निकै महत्वपूर्णं भूमिका खेलेका थिए । पार्टी एकतापूर्वका अधिकांश बैठकहरुको समन्वय पनि उनीबाटै भएको थियो । पार्टी एकताकै अघिल्लो दिन भएको ‘५ बुँदे’ सम्झौतामा पनि उनी साँक्षीको रुपमा रहेका छन् ।
जनयुद्वदेखि नै प्रचण्डको निकट मानिएका प्रभाकर पछिल्लो समय भने प्रचण्डबाटै टाढिँदै गएको विश्लेषण हुन थालेको छ । जसको साँक्षी गत साउन ८ मा प्रचण्ड सचिवालयले निकालेको प्रेस विज्ञप्ती पनि हो । प्रभाकर टाढिएको विश्लेषण हुन थालेपछि प्रचण्डको सचिवालयले प्रेस विज्ञप्ती नै निकालेर प्रभाकर आफ्नै समुहमा रहेको दाबी गरेको थियो । सचिवालयले दाबी गरेपनि प्रभाकरको पछिल्लो भूमिका प्रचण्ड नजिक देखिन्न ।
प्रभाकर टाढिएको विश्लेषण हुन थालेपछि प्रचण्डको सचिवालयले प्रेस विज्ञप्ती नै निकालेर प्रभाकर आफ्नै समुहमा रहेको दाबी गरेको थियो । सचिवालयले दाबी गरेपनि प्रभाकरको पछिल्लो भूमिका प्रचण्ड नजिक देखिन्न ।
प्रभाकर मात्रै नभई नजिक ठानिएका रामबहादुर थापा ‘बादल’ पनि उनको एजेण्डामा सहमत देखिनन्न् । पार्टीभित्र प्रचण्डको अत्यन्तै विश्वासपात्र भनिएका लेखराज भट्टले त खुलेरै समुह परिवर्तन गरेका छन् ।
पछिल्लो खिचातानीसँगै हरिबोल गजुरेल, चन्द्रप्रसाद खनाल, टोपबहादुर रायमाझी र मणि थापालगायतका नेताहरु प्रचण्डको एजेण्डामा सहमत छैनन् । अन्त्यन्तै महत्वका साथ हेरिएको मंगलबारको बालुवाटार बैठकमा पनि रामबहादुर थापा, तोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट र मणी थापाको उपस्थिति थिएन ।
किन हच्कीए पूर्वमाओवादी नेता ?
प्रचण्डको अत्यन्तै निकट मानिएका नेता हरिबोल गजुरेल पछिल्लो पार्टी विवादमा प्रचण्डले अघि सारेको एजेण्ड नै गलत भएको बताउँछन् । संसार न्यूजसँग कुराकानी गर्दै गजुरेलले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दुवै पदबाट राजीनामा माग्ने निर्णय गलत भएको बताए । पार्टी एकताको आधारभन्दा बाहिरबाट उठाइएको एजेण्डा नै गलत भएको उनको ठम्माई छ ।
पार्टीका वरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र वामदेव गौतमको गलत राजनीतिक स्वार्थको बहकावमा प्रचण्ड आएको उनको समिक्षा छ । पार्टी एकतापूर्व भएको सहमतीअनुसार अगाडि बढ्नुपर्नेमा ओली पक्षले गरेको पेलान बेठिक भएपनि प्रचण्डबाट राखिएको पछिल्लो माग गलत भएको उनको बुझाई छ ।
उनीजस्तै मणि थापा र टोपबहादुर रायमाझीले पनि एजेण्डाबारे खुलेरै असहमती जनाएका छन् । प्रचण्ड पार्टी एकताको स्प्रीटभन्दा बाहिरबाट अगाडि बढेको उनीहरुको समिक्षा छन् ।
धेरै पूर्वमाओवादी नेताहरुमा प्रचण्डको कारणले नै पार्टी विभाजन भयो भने पूर्वमाओवादी समुह समस्यामा पर्ने मनोविज्ञान पनि व्याप्त छ । खुलेर कुरा नगरेपनि पार्टी विवादको अन्तिम अवस्थामा पूर्वएमालेहरु एक हुने र पूर्वमाओवादीहरु अप्ठ्यारो पर्ने धेरै नेताहरुको बुझाई छ ।
प्रचण्डको शक्ति सन्तुलन के हुन्छ ?
स्थायी समिति बैठक करिब असफल भएको स्थितिमा प्रचण्डलाई सघाउँदै खनाल र नेपाल समुहले पनि केन्द्रीय कमिटी बैठकको मागमा सहमती जनाएका छन् । बुधबार प्रचण्ड, खनाल र नेपाल निकटका १५२ केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुले हस्ताक्षर गरेरै केन्द्रीय कमिटी बैठकको माग राखेका थिए । उनीहरुको मागमा अध्यक्ष ओलीले सुनुवाई गर्ने नगर्ने टुंगो नभएपनि अबको राजनीतिक समिकरण प्रचण्ड अनुकुल नै छ ।
तर, आफ्नैबाट साथ गुमाउँदा नेपाल र खनाल समुहले विश्वास नगर्ने अवस्था रहने कतिपयको विश्लेषण छ । कतिपय विश्लेषक पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले राखेको ६ बुँदे प्रस्तावले पनि प्रचण्डलाई असहज हुने तर्क गर्दछन् ।
मंगलबार पार्टी विवादकै बीच उपाध्यक्ष गौतमले ओलीकै एजेण्डामा साथ दिने गरि ६ बुँदे प्रस्ताव राखेका थिए । जसमा पूर्वमाओवादी समुहकै ४ जना स्थायी समिति सदस्यले खुलेरै सहमती जनाएका छन् ।
वैशाख २२, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत…
विश्वासको मत लिने ओलीको घोषणा, के गर्ला माधव समूहले ?
वैशाख २०, काठमाडौं । विपक्षीहरुले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरिरहेका…